Tsamba kuvaHebheru 6:1-20
Shanda nesimba kuti ukure (1-3)
Vaya vari kutsauka vakaroverera Mwanakomana padanda zvakare (4-8)
Itai kuti tariro yenyu ive yechokwadi (9-12)
Zvakavimbiswa naMwari zvinotoitika (13-20)
Vimbiso yaMwari uye mhiko hazvichinji (17, 18)
6 Saka sezvo takapfuura dzidziso yekutanga+ pamusoro paKristu, ngatishandei nesimba kuti tikure,+ tisingavakizve faundesheni, kureva kudzidzisazve nezvekupfidza pamabasa akafa uye kutenda muna Mwari, 2 kudzidzisa nezverubhabhatidzo, kuiswa kwemaoko,+ kumuka kwevakafa+ uye kutongwa kusingaperi. 3 Uye tichadaro kana Mwari abvumira. 4 Nekuti kana vari vaya vakambovhenekerwa,+ vakaravira chipo chepachena chekudenga, vakagamuchira mweya mutsvene, 5 vakaravira shoko rakanaka raMwari nemasimba enyika ichauya,* 6 asi vakazotsauka,+ hazviiti kuti vakwanise kupfidza zvivi zvavo, nekuti vanoroverera Mwanakomana waMwari padanda zvakare, vachimunyadzisa pachena.+ 7 Nekuti ivhu rinokomborerwa naMwari parinonwa mvura inogara ichinaya uye rinobva rabereka zvirimwa zvinodiwa nevaya vanoririma. 8 Asi kana rikabereka minzwa nemasora anobaya, rinorambwa uye rinenge rava pedyo nekutukwa, uye rinopedzisira rapiswa. 9 Asi kana muri imi vadiwa, tine chokwadi chekuti kwamuri kunoitika zvinhu zvakanaka, zvinhu zvine chekuita neruponeso, kunyange zvazvo tiri kutaura seizvi. 10 Nekuti Mwari haasi munhu asina kururama; saka haangakanganwi basa renyu nerudo rwamuinarwo nezita rake,+ rwamakaratidza nekushumira vatsvene uye kuramba muchivashumira kwamuri kuita. 11 Asi tinoda kuti mumwe nemumwe wenyu ashande nesimba zvakadaro, kuti muve nechivimbo chizere chetariro+ kusvikira kumagumo,+ 12 kuti musava neusimbe,+ asi kuti mutevedzere vaya vanogara nhaka yezvinhu zvakavimbiswa, vachizviwana kuburikidza nekutenda uye mwoyo murefu. 13 Nekuti Mwari paakavimbisa Abrahamu, sezvo pasina mumwe munhu mukuru kwaari waaigona kupika naye, akapika naiye pachake,+ 14 achiti: “Chokwadi ndichakukomborera uye ndichaita kuti uwande.”+ 15 Saka Abrahamu paakanga aratidza mwoyo murefu, akawana vimbiso iyi. 16 Nekuti vanhu vanopika nemunhu mukuru kwavari, uye mhiko yavo inopedza nharo dzese, sezvo vachiitora sevimbiso yepamutemo.+ 17 Izvi ndizvo zvakaitwawo naMwari. Paakasarudza kunyatsoratidza vagari venhaka yevimbiso+ kuti chinangwa chake hachichinji, akazvisimbisa nemhiko, 18 kuti kuburikidza nezvinhu zviviri zvisingachinji, zvisingabviri kuti Mwari areve nhema nezvazvo,+ isu takatizira kunzvimbo yekupotera tikurudzirwe zvikuru kuti tibatisise tariro yakaiswa pamberi pedu. 19 Tine tariro+ iyi sechinhu chinotsigisa mweya,* yechokwadi uye yakasimba, uye inopinda mukati meketeni,+ 20 umo mune mumwe akatanga kupinda achitimiririra, iye Jesu,+ uyo ava mupristi mukuru nekusingaperi sezvakanga zvakaita Merekizedheki.+
^ Kana kuti “emamiriro ezvinhu achauya.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kana kuti “chinotitsigisa.”